Laser Kutema Muchina - WUHAN GOLDEN LASER CO., LTD.
Yakakwira-inoshanda CO2 laser michina yekucheka, kudhinda nekumaka zvinhu zvisiri-simbi.
Laser Machine ye Textile
Laser Machine yeLeather
Fibre laser yekucheka muchina inokwanisika, isinganetsi kushandisa, uye inoenderana nesimbi yekucheka sisitimu iyo inogona kukubatsira kutanga mutsva wekutanga basa kana kuwedzera purofiti yekambani yako yakanyatsosimbiswa. Kunyanya nyorera simbi sheet & tube.
Sheet & Tube Laser Kutema Machine
3D Robhoti Laser Kucheka Muchina
CO2 Laser Kukumbira kune Isiri-Simbi Sector
Anoshanda Wear & Sportswear
Zvemotokari & Anga
Fibheri Laser Chikumbiro cheMetal Sector
Goridhe Laser yakazvipira kupa madhijitari, otomatiki uye nehungwaru laser application mhinduro
kubatsira echinyakare maindasitiri ekugadzira masystem kusimudzira nekukudziridza hunyanzvi.
GOLDEN LASER inotungamira inogadzira laser michina pasi rese nekuenderera mberi nekugadzira zvigadzirwa zvedu uye nekushandisa advanced technology.
> Tsvaga yedu laser michina
KUSIMBISA UCHENJENYU HWAKO
GOLDEN LASER inokupa yekutanga-kirasi laser michina ine chinangwa chimwe kuti iwe uwedzere kubatsirwa. Yedu laser mhinduro inobatsira iwe kuti uwedzere kubereka uye wakawedzera kukosha kwezvakagadzirwa.
> Tsvaga yedu laser application
GOLDEN LASER yakatanga danho rekushambadzira rekushambadzira network munzvimbo dzinodarika zana nematunhu pasi rese.
> Verenga zvakawanda nezve GOLDEN LASER
Majiniya anowanikwa kumishini yekushandira.
Online & vhidhiyo kutsigira.
Kuisirwa kumunda, kutumira pamwe nekudzidziswa.
Kuchengetedza munda nekugadzirisa.
> Verenga zvakawanda nezve rubatsiro rwebasa